I-TRANSOM YEWINDOWS (IINTLOBO EZIDUMILEYO KUNYE NESIKHOKELO SOYILO) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya I-Transom yeWindows (Iintlobo ezidumileyo kunye nesikhokelo soYilo)
I-Transom yeWindows (Iintlobo ezidumileyo kunye nesikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sokuyila windows I-transom kubandakanya ukuba ziyintoni, ubukhulu obudumileyo kunye nezitayile zekhaya.
Iifestile zeTransom zifunyanwa ngokufuthi kwizakhiwo ezindala nezembali ngenxa yokubaluleka kokwakha okuqala ngeminyaka yee-1800 xa imeko yomoya yayingekenziwa.
Iifestile zeTransom zisebenzela ubuhle kunye nokubaluleka kokusebenza kwiingcango kunye neefestile zeefestile. Emuva xa iifestile ziqhelekile, bezihlala zisetyenziselwa ukuvumela ukungena komoya phakathi ngaphandle nangaphakathi, nangaphakathi kumagumbi nakwezinye iindawo.
Nangona kunjalo, kula maxesha anamhlanje, kunqabile ukufumana ii-transom windows ezinokuvulwa ngokupheleleyo, endaweni yoko, ezizinzileyo ziya ziba namandla.
Yintoni ifestile yeTransom?
Ubungakanani be Window yeTransom
Iindidi zeTransom yeWindows
Ifestile eLungisiweyo yeTransom
Ifestile yeTransom Ngaphezulu koMnyango
IArched Transom yeWindows
IiWindows zeTrans yangasese
I-Shed Transom yeWindows
Ukuhombisa kweTransom yeWindows
Iindidi zonyango lwe Window yeTransom
I-Transom ligama lokwakha iiplanga ezithe tyaba ezihamba ngaphaya kwesakhiwo phezu komnyango kunye neefestile zeefestile- apha ngasentla ngaphezulu ezibekwe kwiifestile zeewindows.
Ziza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo, iimilo, kunye nobungakanani- nangona kunjalo, igama lisekwe ngokuqinileyo kwindawo ebonakalayo yeewindows.
Ezi windows lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukumema ukukhanya kwendalo okanye ukukhanya kwelanga ngaphakathi kwaye ungafakelwa ngaphakathi nakwindonga zangaphandle. Kwezokhuseleko kunye nemicimbi yabucala, ezi windows zafakwa phezulu phezulu kufutshane nophahla.
Ngoku, ukuba uyazibuza ukuba ziya kusebenza njani ezi - kulungile, kukho iintonga zentsimbi kwiihenjisi ezivumela iwindow ukuba isebenze ngokulula kakhulu ukusuka kumgangatho womhlaba (hayi kwimeko yeewindows ezitshintshayo).
Iifestile zeTransom azinabungakanani bunye kwaye zinokulinganisa zincinci njengeesentimitha ezimbalwa, ukuya kwiinyawo ezininzi ubude. Ziyakwazi ukwakhiwa ngokwesiko ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho okanye zakhiwe ngokulula.
Unokuba noxande, isikwere, isetyhula, okanye iarched windows - ubukhulu bayo buyahluka ukusuka kuma-20 kuye kuma-72 kububanzi kwaye uqale ukusuka ku-6 ukuya ngaphezulu kwe-15 ukuphakama-kodwa eyahluka kakhulu kumakhaya enziwe ngokwesiko kunye namakhaya okwakha.
Itrasing yefestile yedatha ihlala iphakathi ko-2 ″ ukuya ku-6 ″, kodwa inokuba ncinane njenge-1 ″ okanye iinyawo ezininzi ukuphakama ukuba uyafuna. Funda ngakumbi malunga ubungakanani obuqhelekileyo bewindow Apha.
Iifestile zeTransom ziza kwiindidi ezahlukeneyo kunye nezitayile. Kuxhomekeka kwisitayile yoyilo, olona hlobo lwefestile lwesintu lu-arched okanye isetyhula enesahluli esahlula iipanesi kubude obulinganayo kunye nerediyasi. Ukuba unesimbo seemodyuli kunye nesala maxesha, unokukhetha oonxantathu okanye isikwere sedrama yeewindows ezinokwenziwa ngokwesiko ukuze zilungele izithuba ezithile.
Kwimeko yophahla olugangathiweyo okanye olubekiweyo, unokukhetha iA-angled transom windows okanye iifestile ezinesetyhula.
Olunye uhlobo lweefom zeewindows ziifestile zefestile. Zimile okwe fan kwaye ziyisetyhula ezizinto zokuhombisa kumakhaya emveli kunye nesitayile sotshintsho. Ezi zinokuxhonywa okanye zilungiswe ngokuxhomekeke kwizalathiso zomsebenzi kunye nemisebenzi.
Iphefumlelwe kakhulu yi-gothic yoyilo, unokukhetha isetyhula kwifestile ephezulu kunye noxande enezantsi.
ilokhwe ende yolwamkelo lomtshato
Ezinye iiwindows zikwakha isakhelo esenziwe ngepaneli esinama-symmetrical-like, grid-like, okanye akukho iipateni konke konke. Nangona kunjalo, zibukeka zintle, zingaphelelwa lixesha, kwaye zinobuchule kwisitayile ngasinye.
Ixabiso lefestile ye-transom iyahluka ngokuxhomekeka kubungakanani bayo. Nangona kunjalo, umndilili weendleko zibaleka ukusuka kwi-200 ukuya kwi-600 yeedola njengeseti.
Iifayile ze-transom ezilungisiweyo zezona zingenakuvulwa. Ezi festile zilungisiweyo zinokubekwa ngaphezulu komnyango okanye ecaleni kweminyango kunye neefestile ukuvumela ukukhanya kwendalo ngokwaneleyo kwiipaseji.
Kuxhomekeke kwiipanishi kunye nokwahlulahlula, iqhekeza ngalinye leglasi lilungisiwe ukwenza ipateni ethile yokuhombisa.
Kunconywe kakhulu kwizimbo zangoku, zotshintsho, kunye nezesiko, ezi windows zinokusetyenziselwa ukuphakama, iindlela eziphambili zokungena, iingcango zasemva kwendlu, iifestile kunye neepatio. Uyilo olufanayo iifestile zokucoca ezibekwe ngaphezulu kodonga.
Iifestile zeTransom ngaphezulu komnyango zinceda ekungeniseni ukukhanya kwendalo okwaneleyo kwigumbi. Kwimicimbi yokhuseleko kunye nemfihlo, ezi windows zisetyenziselwa ukungena komoya.
Kwimeko yegaraji kunye namagumbi angaphantsi, ezi festile zisetyenziselwa phezulu kufutshane nesilingi ukukhanyisa iindawo ezingaphakathi ezibuthathaka nezimfiliba.
Iifestile zeCasement ngeefom ezitshintshileyo ezingentla.
Ezi setyhula, iiarched windows ziimpawu ezintle zokuhombisa ii-facade zakho zasekhaya. Zingasetyenziswa phezu kweengcango kunye neefestile okanye nakwizinto ezinamandla.
Kuphahla olumiselweyo kunye namakhaya anophahla oluthambekileyo, ukusebenzisa iifestile ezigungxulileyo kwenza ukhetho olukhulu. Ezi arch transom windows zinokulungiswa okanye zixhomekeke kuxhomekeke kwiimfuno zakho. Azicetyiswa kumakhaya anamhlanje anesitayile enemigca ecocekileyo.
Iifestile zeTransom zenza ukhetho olukhulu lokuvula iindawo zokuhlambela, indawo zokuhlamba kunye neendawo ezingento yanto. Ngokukodwa xa uzisebenzisa kwiindawo ezinomphunga, ezi windows zetrom kwigumbi lokuhlambela ziyindlela elungileyo yokukhuthaza umoya.
Ungasebenzisa kwakhona ii-transom ezinqamlezileyo zegumbi lokuhlambela kwaye wabelane ngazo namagumbi akufutshane.
Ezi ntlobo zeefestile ngaphakathi zinika ikhaya imvakalelo evulekileyo kunye ne-airy ngelixa isenza sibonakale sibonakala ngathi senziwe ngathi siyinto eqhelekileyo kwaye yakudala.
Iifestile ze-Shed ezijikeleziweyo ziziingxande, zineewindows ezinde ezibekwe phezulu eludongeni kufutshane nophahla.
Zisetyenziswa kakhulu kwiigaraji kunye nakwizinto zexeshana ukubakhanyisa. Ezi windows ziza kuluhlu olubanzi lobungakanani kunye neemilo- kwaye ngokufanayo, zinokulungiswa okanye zixhomekeke.
Kuba zibekwe kubude obuthile, yenza indlela entle yokuba ngasese kunye nokhuseleko. Ukuba unqwenela ukukhanya kwendalo ngakumbi, qiniseka ukwandisa ezi transom windows ukuya kwisilingi esiphelweni ngasinye.
Akukho mida kuyilo lweendlela zokuhombisa ii-transom windows. Kuxhomekeka kubume obahlukeneyo, izimbo, kunye neefom, ezi windows zetrom ziye zasetyenziswa ngokubanzi kwimbali kunye neempawu ezibalulekileyo zokwakha.
Kodwa nangoku, ezi festile zokuhombisa zisetyenziswa ngaphezulu kweminyango kunye neendonga. Ezinye iifestile zokuhombisa zivelisa iglasi okanye ibala ukuprintwa kwefestile , iglasi efriziwe, enombala, okanye enemibala.
Kwaye kwelinye icala, ezinye izinto zesakhelo ezisetyenzisiweyo zibandakanya iinkuni, i-vinyl, i-aluminium, i-fiberglass, kunye nezinye ezininzi ezisetyenziswa ngohlobo lweepanishi kunye neepaneli kwezi windows zokuhombisa.
Unyango lwefestile kwiewindows ze-transom yenye yezona zinto zilucelomngeni ekufuneka uzenzile- kwaye ziyamkholisa.
Kukho iindlela ezingapheliyo zokunyanga iifestile zakho ngombala othile wee-shades. Unokusebenzisa ii-shades, iisheers, iikhethini, iivali, ukubumba, okanye iisheyidi.
Ukuba awukhethi ukuxhoma ezi zinto, unokunyanga iglasi ngamabala, iqabaka, uburhabaxa, okanye usebenzise iglasi eyi-smart. Masifunde ngeendlela ezimbalwa zokusebenzisa unyango lwefestile kwiifestile ze-transom.
Iimfama ziyindlela efanelekileyo yokugcina ubumfihlo ngelixa ungeze ixabiso lokwakha ukuba ukhangele ukucoceka nokukhangela.
Unokusebenzisa iVenetian, iimfama ezimeleyo, okanye imibala ethandabuzekayo. Unokufumana ngokulula uninzi lweendlela zoyilo, amalaphu, ubungakanani, uburhabaxa, kunye neeprinta zokwenza ikhaya lakho libukeke lingenamthungo kwaye lidala.
iisuti zehlobo zase panti zemitshato
Olu lukhetho olunconyelwayo ukuba imilo yesilingi yakho yenza ukuba kube nzima ukuyifaka intonga yekhethini kwaye uyiqhube.
Umzekelo, i-sloped kunye ne-gabled windows yenza ukuba kube nzima kakhulu, yiyo loo nto, ezi blinds zenza ukhetho olukhulu kwiimeko ezinjalo.
Izibhambathiso zomtshato zokuba ngcono okanye okubi
Umzekelo, i-shades ethandekayo yabasetyhini inika amakhaya akho inkangeleko yekoloniyali ukuze uzenzele ngokobungakanani kunye neemfuno.
Iisutter zenza ukhetho olukhulu ukuba iitromu ze-transom zinzima kwaye zimile ngokungacacanga. AmaShutter eza ngeendlela ezahlukeneyo, imibala, ubukhulu, imilo, kunye neefom ke ngoko kukho ukhetho oluninzi onokukhetha kulo kuxhomekeke kukhetho lwakho loyilo. Izivalo zomthi zezona zisetyenziswa kakhulu.
Kumakhaya abhalwe ngokwesiqhelo, amaxabiso asetyenziswa njengonyango lwefestile kwiifestile ze-transom. La ngamaqhekeza amancinci agubungela iifestile ukunciphisa umda wokungena kwendalo ngaphakathi ngelixa ugcina ubumfihlo ngaphakathi.
Ezi zindwangu ziza ngeendlela ezahlukeneyo, imibala, umahluko, izixhobo, uburhabaxa, kunye noyilo ukuze ukwazi ukukhetha ukhetho olululo ngokuxhomekeke kwindlela yoyilo lwasekhaya.
Ngokukhetha okokuhombisa kunye nokuhombisa, ungasebenzisa izakhelo zomthi eziqingqiweyo ezijikeleze ezi windows ukunika umnxeba omnandi. Ezi zinto zibunjiweyo zinokuba mhle okanye zihonjiswe, njengoko ufuna njalo.
Olu lukhetho olukhulu ukuba sele ulwenzile ulwenziwo olusebenza kufutshane nophahla njengoko ukubonakala ngokubanzi kungaphuma kube ngcono kunokuba ubulindele. Okwangoku, le yindlela entle yokwenza ukujonga okungagungqiyo kwaye okumanyeneyo.
Iifayile zeTransom zibambe ukubaluleka okukhulu ngokwenkcubeko nangobuhle. Ezi festile bezikhona kangangeenkulungwane, nangona zanyamalala embindini, kubonakala ngathi zibuyile mva nje.
Abanini bamakhaya abaninzi kunye nabakhi kwihlabathi liphela bakhetha ezi iintlobo zeefestile ukulungiselela iiprojekthi zabo ezizayo.
Babonisa imvakalelo yobuhle kumakhaya anomdla kangako. Ungazisebenzisa ngokupheleleyo ezi windows emakhayeni akho ngaphandle kobunzima, kodwa ugcine engqondweni umxholo woyilo okhoyo ojikeleza indlu.
Ngoku, ezi windows zishiyeke kuphela njengezinto zobugcisa kwaye umsebenzi wazo ubonakale ngathi unyamalale ngokupheleleyo.
Ke, ingaba wonwabile ukufaka ii-transom windows kwiiprojekthi zakho ezizayo? Ezi windows ziyindlela entle yokongeza into enesitayile ekhayeni lakho. Kwaye ngokufanayo, enye yeendlela ezilungileyo zokubandakanya inkcubeko, imbali, kunye nomlinganiswa xa zizonke.
Kwakhona, sazise amagqabantshintshi kunye namava akho kwizimvo ezingezantsi njengoko singathanda ukuva amabali akho e-transom yefestile.
uyisebenzisa nini i-m
ipuli emile okwezintso
Unina wesuti yomtshato womtshakazi
zibiza malini ii-dj zomtshato
Umtshato ogqwesileyo iingoma zomdaniso